Life skills- Faritra Anosy: tanora 1 050 nianatra namaha olan’ny fiainana | NewsMada
Life skills- Faritra Anosy: tanora 1 050 nianatra namaha olan’ny fiainana
Fomba iray hampitana ny fahaizana miatrika fiainana amin’ireo zatovo sy tanora ny fandaharanasa Life skills, iarahan’ny minisiteran’ny Tanora sy ny Unicef ary vatsian’ny Tahiry koreanina ho an’ny fampandrosoana (KOICA) ho an’ny faritra Anosy, nanomboka ny taona 2017. Raha efa manana ny club des heures creuses ny mpianatra eny amin’ny CEG, tsy manavaka fa mandray ireo zatovo tsy mianatra intsony na ireo mbola manohy fianarana ny fandaharanasa. Afaka miditra ho mpikambana avokoa ny ankizy rehetra 10 ka hatramin’ny 18 taona. Entanina ireo zatovo hianatra ny fiainana ka miainga amin’ny alalan’ny olana miseho amin’ny fiainana ao an-tokantrano sy eny anivon’ny fiarahamonina ny hetsika. « Ohatra amin’izany ny fampanambadiana aloha loatra ny zatovovavy. Ahoana ny fomba azony iatrehana izany raha tena mitranga tokoa ao amin’ny fianakaviany », hoy ny tomponandraikitry ny Unicef any amin’ny faritra Anosy, Razafindrabe Patricia.
Manana vondrona iray, Ajaja Tahafigne ny ao amin’ny distrikan’Amboasary izay mihaona indroa isan-kerinandro miaraka amin’ny lohahevitra iray.10 ny mpanentana ao Amboasary amin’izao fotoana izao.
Lohahevitra 16 mandritra ny roa volana
Maharitra roa volana ny fifampizarana ataon’ny mpanabe olon-tsahala ho an’ny vondrona zatovo iray. 25 ny mpikambana isam-bondrona. Manodidina ny lohahevitra 16 no ifanakalozana ao anatin’ny roa volana : ady amin’ny herisetra, zon’ny nkizy, fananahana ara-pahasalaman’ny zatovo (SRA), fahafantarana ny tena manokana, ny lalàna mifehy ny fiainana ao anaty fiarahamonina. Miara-miasa amin’ny fokontany sy ny mpanabe ny tomponandraikitry ny fandaharanasa amin’ny fijerena ny ankizy vonona hanaraka ny life skills. Omena lanja manokana ny ankizivavy noho izy marefo kokoa eo amin’ny resaka fampanambadiana mialoha ny zatovovavy izay kolontsain’ny faritra. Manaraka fampianarana mamaky teny sy manoratra ireo efa niala an-daharana tany an-dakilasy. Misy koa ny tohana amin’ny fihariana madinika ho an’ireo efa bebe taona. Tany am-piandohana, narisarisa ny ray aman-dreny tamin’ny fisian’ny life skills fa rehefa noresena lahatra izy ireo ka nampahafantarina azy ny soa entin’ny fifampizarana ho an’ny zanany, niova ny fihetsik’izy ireo, hoy ny mpanentana iray ao Amboasary.
32 mpanentana voaofana
Nandritra ny taona 2018, nahatratra 1 050 ny zatovo afaka nianatra ny fiatrehana ny fiainana avy amin’ny fandaharanasa.600 ny fanentanana tontosa ho an’ny kaominina maromaro ao antin’ny distrika telo mandrafitra ny faritra Anosy. 32 ny mpanentana olon-tsahala voaofana handray ny fanentanana. Amin’ity taona ity, ho an’ny telo volana voalohany, 750 ny tanora hoezahina hoentanina raha 8 000 ny tanjon’ny tetikasa hatramin’ny taona 2021.
Projet de texte sur la lutte contre les violences basées sur le genre : les députés se font désirer 13/12/2019
Mampihorohoro amin’ny basy sy ny famaky: mpanao trafika 6 voasambotra niaraka tamin’ny sokatra 190 13/12/2019
Kitra – COSAFA U20: raraka teo amin’ny manasa-dalana ny Barea 13/12/2019
Fampianarana ambony: raikitra ny oniversite maty 13/12/2019
Paikady SNDER*: “Ambanivolo ho matihanina sy mirindra” 13/12/2019